Facebook မှာ လုံခြုံအောင်နေနည်း ( ၁ ) | Digital Tea House
Facebook တွင် အကောင့်၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Setting များပါရှိသလို မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်၏လုံခြုံရေးကို ချိန်ညှိလို့ရတဲ့ Setting များလဲ ရှိပါတယ်။ ထို Setting များထဲတွင်မိမိအကောင့်တွင်တင်သည့် Post များ ၊ ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများကိုဘယ်သူတွေကို မြင်စေချင်သလဲ ချိန်ညှိနိုင်သည့် Setting ပါဝင်ပါတယ်။ Facebook၏ privacy setting ထဲကိုဝင်လိုက်မည်ဆိုလျှင်ပထမဆုံးမြင်ရသော Who can see your Highlight သည် မိမိ ပိုစ့်တင်သည်အခါ မြင်ရမည့်သူများကိုရွေးချယ်ထားလို့ရတယ်။ Friend (သူငယ်ချင်းများသာ) ၊ Public ( အားလုံး) နှင့် Only Me ( မိမိ တစ်ဦးတည်းသာ) ဆိုပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ မြင်စေချင်သည့် ( သို့မဟုတ် ) မမြင်စေချင်သည့် သူများကိုလည်း Friend except ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
မိမိကိုမည်သူများမှ friend request ပို့နိုင်သည်ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း Who can send your friend requests? တွင်ပြောင်းလဲချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။မိမိတွင်ရှိသော Friend များကို မည်သူများကိုမြင်စေမည်နည်း။ အကောင့်ဖွင့်ရာတွင် သုံးခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ် နှင့် Email ကို မည်သူများမှ မြင်နိုင်သနည်း။ ထိုအရာများကို မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်၍ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ Facebook သုံးစွဲမှုပေါ်မူတည်ပြီး မည်သည့်အရာတွေကိုဖော်ပြထားမည် မည်သူတွေကိုကန့်သတ်ထားမည် မည်သည့်အရာတွေကိုဖော်ပြထားရန်လိုအပ်သည်တို့ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိ Timeline ပေါ်တွင် မည်သူတွေကို Post တင်ခွင့်ပေးမည်လဲဆိုတာကိုလဲ Timeline and tagging ထဲတွင် Who can post on your timeline? တွင် ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မွေးနေ့တွင်ဖြစ်ဖြစ်၊ Live Event တစ်ခုခုတွင်ဖြစ်ဖြစ် မိမိ freind များမှ မိမိ Timeline ပေါ်တွင် Post များလာတင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းမပြုခြင်း ကိုလည်း မိမိကထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့မိမိ၏ Timeline ပေါ်တွင် Friend များမှ တင်ထားသည့် မိမိခွင့်ပြုပြီးသော Post များကိုလည်း မည်သူများကို မြင်ခွင့်ပေးမည်ကိုလည်း Who can see what orthers post on your timeline? မိမိကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ မိမိကို Tag တွဲသည့် Post များကိုလည်း မိမိ Timeline ပေါ်ရောက်မသွားခင် မိမိ ခွင့်ပြုမပြုကို Review တွင် on ဟုရွေးချယ်ထားမည်ဆိုလျှင် Facebook က Notification တွင်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ထိုအခါ ထို post များကို Add to timeline ရွေးချယ်၍ Timeline ပေါ်တွင်ထားမည်မထားမည်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။